Iimagnethi ezisisigxina ziyinxalenye ebalulekileyo kubomi banamhlanje. Zifumaneka okanye zisetyenziselwa ukuvelisa phantse zonke izinto eziluncedo zanamhlanje. Iimagnethi zokuqala ezisisigxina zaveliswa kumatye okwenzeka ngokwendalo abizwa ngokuba yindawo yokuhlala. La matye aqala ukufundwa ngaphezulu kweminyaka engama-2500 eyadlulayo ngamaTshayina kwaye emva koko ngamaGrikhi, afumana ilitye kwiphondo laseMagnetes, ekwathi kulo igama lawo laba negama. Ukusukela ngoko, iipropathi zezinto zemagnethi ziphuculwe kakhulu kwaye namhlanje izixhobo zomazibuthe ezisisigxina zinamakhulu amaxesha amaxesha omelele kuneemagnethi zakudala. Igama elithi umazibuthe osisigxina uvela kubuchule bemagnethi ukubamba ukuhlawuliswa kwemagnethi emva kokuba isusiwe kwizixhobo ezenza umazibuthe. Ezi zixhobo zinokuba zezinye iimagnethi ezisisigxina ezinamandla, iimagnethi zombane okanye iikhoyili zocingo ezibizwa ngokufutshane ngombane. Ukukwazi kwabo ukubamba umtsalane wemagnethi kubenza babe luncedo ekubambeni izinto endaweni yazo, ukuguqula umbane ube sisisusa samandla kunye nokunye (iimoto kunye neejenereyitha), okanye kuchaphazela ezinye izinto eziziswe kubo.